Inkomba ye-Insulinemic > Imibuzo
Inkomba ye-Insulin kanye nokunciphisa umzimba
Sesikujwayele ukudla okuningi, ngeqiniso lokuthi amakhalori nquma konke, konke, konke ... Sifunde ukudla carbohydrate mahhala , ungene ngaphakathi emnyameni inkomba ye-glycemic yemikhiqizo . Kepha maye! - Izinkinga zesisindo zahlala.
Kepha ososayensi, izazi zokudla kanye nodokotela abayeki, bangena ngokujulile ezindleleni eziyimfihlo zokulawula isisindo somzimba.
Angazi ukuthi ngabe bonke abasekeli bokudla okunempilo bayayazi yini inkomba ye-"insulinemic index", kodwa njengoba kwenzeka, idinga ukunakwa lapho kudalwa imenyu enempilo.
Sizothola ukuthi yini nokuthi kungani kudingeka sazi ngayo!
Ngokungafani I-GI (bona imininingwane lapha)
I-AI (asiyi endle enezinto eziphilayo, sizofushaniswa)
— inkomba yejubane nethamo lokukhiqizwa kwe-insulin lapho kuphendulwa ukusetshenziswa komkhiqizo.
I-AI yaqala ukukhonjwa nguJenny (Jennette) Brand-Miller, uprofesa eYunivesithi yaseSydney.
UBrand-Miller waphawula ukuthi ngaphezu kwezinkomba zokukhula noshukela wegazi uqobo, unganaka ngejubane elingakanani futhi i-insulin “iza” kangakanani kulo ushukela futhi kuzo zonke izimo ukuthi ushukela omningi ubangela ukukhululwa okuqinile kwale hormone.
Uma wesaba ukudideka kuyo yonke imiqondo, bese kuyize, ngoba i-GI ne-AI ngobuningi bamacala iyahlangana.
Kunama-nuances ambalwa kuphela awahlukanisa, esizokhuluma ngawo esihlokweni.
1. Amaprotheni namafutha akanayo inkomba ye-glycemic, kepha anenkomba ye-insulinemic.
Imikhiqizo yamaphrotheni awunawo nomthelela ushukela, kepha thinta ngesilinganiso sokukhiqizwa kwe-insulin.
Isibonelo, inhlanzi (AI - 59) nenyama yenkomo (AI - 51).
Lokhu akusho ukuthi le mikhiqizo kufanele ilahlwe.
Ngemuva kwakho konke, insulin ephendula kokudla okungenayo i-carbohydrate kufihlwe ukuletha amaprotheni namafutha esibindini lapho i-gluconeogeneis yenzeka khona.
Lokho wukuthi, indlela ekhethekile ye- “non-carbohydrate” ekhethekile eyenziwe ngayo, idlula esigabeni sokuqongelwa kwamadiphozithi wamafutha futhi ihlale esibindini, i-cortex yezinso nemisipha.
Amandla kagesi angaba khona kwezicubu.
Isiphetho silula: inyama nenhlanzi okudliwayo, kepha hhayi ukudla izinhlanzi nenyama yenkomo ndawonye ene-carbohydrate etholakala ngokugayeka kalula ne-GI ephezulu (ngokwesibonelo, amazambane, ilayisi elimhlophe, isinkwa), iphonsa ushukela omangalisa egazini.
2. Ushukela omningi + i-insulin ephezulu = ukhuluphele, imithombo yamafutha!
Ososayensi bakusungule lokho eminye imikhiqizo ikhombisile ukuthi cishe ayinawo umthelela ijubane kanye nethamo lokukhiqizwa kwe-insulin.
Lokhu kusho ukuthi izitsha ezivela kubo ziyakwazi ukuhlinzeka nge-satiety isikhathi eside!
Uhlu Lomkhiqizo lwe-AI
Amafutha E-Olive - AI = 3
I-Avocado - AI = 5
Ama-Walnuts - AI = 6
I-Tuna - AI = 16
Inkukhu - AI = 20
Imikhiqizo ene-AI ephezulu
Ama-champI we-AI yimithombo elula ye-carbohydrate nemithombo yesitashi!
Ama-jelly candies - AI = 120
Ama-pancake nama-pancake avela kufulawa omhlophe - AI = 112
UMelon - AI = 95
Ubhatata - AI = 90
Ibhulakufesi lekuseni - AI = 70-113
Imikhiqizo emibili ethembekile kakhulu: i-AI ephezulu ne-GI ephansi kakhulu
iyogathi : I-GI - isuka ku-35 iye ku-63 ngokuya ngokwakhiwa, i-AI - 90-115
amawolintshi : I-GI engadluli ku-40, i-AI kuze kube ngu-60-70).
I-yogurt ephakamisa i-insulin ngezithelo neminye imikhiqizo enoshukela olulula kuyo iyinhlanganisela embi kakhulu yesibalo sakho!
Futhi vele iyogathinge owolintshi - Kungcono ukhohlwe!
Kepha kuhle ukwengeza amafutha enempilo (amantongomane, ibhotela nama-avocados) nenkukhu nge-tuna kumenyu!
I-yogog kuyasiza, kepha uma kuhlangene ikhukhamba .
3. Ukusetshenziswa kwemikhiqizo engavuseleli ukuhlukunyezwa kushukela wegazi nokukhishwa kwe-insulin akukukhuthazi ukuvela kwe-insulin ukumelana kwe-insulin.
Lokhu kuphazamiseka kwe-metabolic kuvela, lapho umzimba ulahlekelwa ukuzwela kwawo ku-hormone.
Bese kuthi ukukhuluphala neqembu eligcwele lezifo livele.
Naka i-fiber, engenayo i-GI, kepha yenza ukudla kwe-carbohydrate kube lusizo kakhulu, "ukudonsa" ingxenye yokwethuka kweglucose.
4. Inani le-asidi, kufaka phakathi i-lactic acid, lithinta isilinganiso sokukhishwa kwe-insulin.
Yize iyogathi neminye imikhiqizo yobisi (eyosiwe) yobisi ene-AI ephezulu, inkampani ngomunye umthombo wama-organic acid (ngokwesibonelo, ukhukhamba oluhlafunwe) banciphisa izinga lokuvikelwa kwe-insulin noma ngabe kusetshenziswa isinkwa esimhlophe nabo.
Uma udla ukudla okuphezulu ushukela noma isitashi, kufanele ukukudle kuhlanganiswa nokuthile kukhethwe, kukhethwe noma omuncu.
Yilokho, le yoghur enama-apula, hhayi ngezithasiselo zezithelo.
Khumbula isiGrikhi isoso se-tzatziki, ifaka iyogathi, ukhukhamba, amakhambi kanye negalikhi
UJanette Brand-Miller waseNyuvesi yaseSydney waphawula ukuthi kwezinye izikhathi amanyikwe afihla kakhulu i-insulin lapho ephendula ukusetshenziswa kwezinye izinhlobo zokudla okunenkomba ephansi ye-glycemic.
UJeanette Brand-Miller ngokuqhathanisa akazange athathe i-glucose (nge-GI), kodwa isinkwa esimhlophe . Inkomba yayo ye-glycemic ithathwa njengomhlangano njenge-100.
Kokuhlolwa nokubalwa kwe-AI ne-GI, asisebenzisanga izingxenye zomkhiqizo eziqukethe i-50 g yama-carbohydrate, kepha izingxenye zomkhiqizo ezikhiqiza inani elifanayo lamandla: i-1000 kilojoules (240 kcal.).
Umkhiqizo oqinile we-AI (Stronger GI)
(Inombolo yokuqala yile I-GI, idijithi lesibili ngu I-AI imikhiqizo eyenziwe nguJ. Brand-Miller)
ICroissant - 74 no-79
Ikhekhe - 65 no-82
Amakhukhi amaDonuts - 63 no-74
Amakhukhi - 74 no-92
Amabha we-Mars - u-79 no-112
Amantongomane - 12 no-20
I-yogog - 62 ne-115
I-ayisikhilimu - 70 no-89
Ama-Potato Chips - 52 no-61
Isinkwa esimhlophe - 100 kanye ne-100
Isinkwa saseFrance - 71 no-74
Inyama yenkomo - 21 no-51
Izinhlanzi - 28 no-59
Ubhanana - 78 no-81
Amagilebhisi - 74 no-82
Ama-apula - 50 no-59
Amawolintshi - 39 no-60
Insulin - "umqhubi" kashukela, insulin - Le yihomoni ebhekele ukuguqulwa kwama-carbohydrate ibe ushukela. Lapho ukudla okuqukethe ama-carbohydrate kungena emzimbeni, ama-pancreas afihla i-insulin.
Ngaphezu kwalokho, i-hormone ijoyina ushukela bese “iyidlulisa” emithanjeni yegazi iye kwizicubu zomzimba: ngaphandle kwe-hormone, ushukela awukwazi ukungena kwezicubu zolwelwesi lweseli. Umzimba ufaka ngokushesha ushukela ukuze ubuyisele amandla, bese ushintsha izinsalela zibe yi-glycogen bese uyishiya igcinwe kwezicubu zomzimba nakusibindi.
Uma umzimba ungakhiqizi i-insulin eyanele, ushukela ngokweqile wakheka egazini, obangela ushukela isifo sikashukela .
Enye inkinga ihambisana ne-adipose izicubu zeseli. Lawa maseli, ngenxa yalesi sifo, alahlekelwa umuzwa wawo futhi awavumeli “ushukela” ngaphakathi. Ukuqunjelwa kweglucose kungakhula ukukhuluphala lokho kudala nesifo sikashukela.
Ukuze ungaguli futhi ube mfushane, kufanele ucabangele imikhiqizo ye-AI.
Uma i-GI ikhombisa izinga lokuguqulwa kwezinto zibe ushukela, khona-ke i-AI yemikhiqizo ikhombisa isilinganiso sokukhiqizwa kwe-insulin ediliza imikhiqizo.
I-AI isetshenziselwa ini?
Ukuthola inzuzo ngempumelelo yemisipha Abasubathi basebenzisa inkomba yomkhiqizo we-insulin. Imvamisa esetshenziswa yilaba abasubathi bezinkomba okuthi ukufakwa ngokushesha kwe-glucose kulingane nokutholwa okusheshayo kwesisindo semisipha.
I-AI ayisebenzi kuphela ekwelapheni ukuphazamiseka kwe-metabolic kodwa futhi ekudleni . Ukubala i-AI kubalulekile ukuze ugcine ukudla okunempilo.
Isisindo senzuzo kuya ngesimo samanyikwe akho nokuzwela komzimba wakho ku-insulin. Umuntu onesibindi esinempilo angadla yonke into nganoma yisiphi isamba, kuyilapho egcina isisindo esijwayelekile futhi angakhathali. Umuntu othambekele ekukhuluphisweni komzimba unesifiso soku hyperinsulinism futhi, ngenxa yalokho, ukukhuluphala.
Ingabe akhona amathuba okunciphisa umzimba?
Manje umbuzo uwukuthi, yini okufanele uyenze ngakho? Ingabe lokhu ukwephulwa kwe-pathological kokuzwela kwe-insulin kusincisha unomphela ithuba lokususa amanoni ngokweqile?
Into esemqoka — isifiso (ugqozi) futhi usizo lochwepheshe abanekhono.
Susa kusuka ekudleni kokudla okune-GI ephezulu noma i-AI:
izitsha ezinoshukela, imikhiqizo kafulawa, amazambane nelayisi elimhlophe,
Ukudla okuphezulu kuma-carbohydrate - imikhiqizo elicwengekile (ufulawa, ushukela, ilayisi elimhlophe), kusetshenzwe kahle (ama-corn flakes, ama-popcorn nelayisi, amaswidi e-chocolate coated, ubhiya),
imikhiqizo emisha - esetshenziswe eRussia isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-200 (amazambane, ummbila).
kusuka kwimifino - beet kanye nezaqathi,
kusuka kuzithelo - ubhanana kanye namagilebhisi.
Inhlanganisela Yomkhiqizo ehamba phambili
izitsha ezinokuqukethwe kwesitashi okuphezulu: amazambane, isinkwa, uphizi - ungahlanganisi ne-protein: inhlanzi, ushizi wekhokho, inyama,
yidla ukudla okunesitashi ngamafutha emifino, nebhotela, kanye nemifino,
Ukudla okusheshayo kwesitashi se-carbohydrate akuvunyelwe
Amaprotheni namafutha alungele ama-carbohydrate asheshayo, kepha hhayi imifino nhlobo,
Amafutha angahlanganisiwe kanye nama-carbohydrate ayinkimbinkimbi iyinhlanganisela ezuzisa kakhulu.
Ungasabalalisa kanjani izinto ngokudla
ibhulakufesi - ama-squirrels,
ama-carbohydrate asheshayo nesitashi - kufinyelela emahoreni ayi-14,
kwesidlo sakusihlwa, ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi namaprotheni (ngokwesibonelo, irayisi ngebele lenkukhu).
Ngeshwa, akunakwenzeka ukuthola i-AI yemikhiqizo yokudla ngokwakho . Ngakho-ke, ungasebenzisa itafula elikhethekile
Ithebula le-AI yokudla
Ngokwezinga le-AI, imikhiqizo ihlukaniswe izigaba ezintathu:
ukukhulisa inani le-insulin: isinkwa, ubisi, amazambane, izinto ezibhakiwe, ama-yogurts anama-filler,
nge-AI ephakathi: inyama yenkomo, inhlanzi,
I-AI ephansi: i-oatmeal, i-buckwheat, amaqanda.
Amakhandlela we-Caramel 160
I-Mars Bar 122
Ubhatata Potata 121
I-Filler Yogurt 115
Isinkwa (Esimhlophe) 100
I-Kefir, ubisi olubilisiwe olubunjiwe, iyogathi, ukhilimu omuncu 98
Isinkwa (Simnyama) 96
Amakhukhi ama-Shortbread 92
I-ayisikhilimu (ngaphandle kwengquza) 89
Ilayisi (elimhlophe) 79
Potato Fried File 74
Ilayisi (nsundu) 62
Izambane lamazambane 61
Apula, izinhlobo ezahlukene zezinhlanzi 59
Pop Pop 54
UMuesli (ngaphandle kwezithelo ezomile) 46
Amaqanda enkukhu 31
I-Pearl ibhali, i-lentilles (eluhlaza okotshani), amakherubhi, amagilebhisi, ushokoledi omnyama (70% cocoa) 22
Amantongomane, ubhontshisi, ama-apricots 20
Ulethisi we-Leaf, utamatisi, isitshalo seqanda, u-anyanisi, u-anyanisi, amakhowe, upelepele (oluhlaza), u-broccoli, iklabishi
Imbewu ye-sunflower (engafakwanga) 8
500 g yogurt yamaGreek (amafutha angama-10%)
4 clove ugarlic, okusha
usawoti, upelepele - ukunambitha
Hlanganisa iyogathi yamaGreek kahle.
Cwecwa ikhukhamba bese ulinamathisela phezulu.
Sawoti ikhukhamba bese ulinda kuze kube yilapho ijusi likhukhamba lihlala.
Cwecwa igalikhi ngasikhathi sinye.
Faka ikhukhamba endwangu ehlanzekile bese uyanyenya.
Faka ikhukhamba ku-yogurt bese uxuba.
Ake ume kancane nesizini ngosawoti (ngokucophelela) nopelepele.
Ngabe i-insulin idlala yiphi indima emzimbeni?
Ngaphakathi kweseli yamafutha kuqukethe ukwakheka okuminyene - ama-triglycerides. Futhi kunama-acid wamahhala aseduze, ziningi zazo, zihlala zingena esitokisini esinamafutha, ziphume ... Le nqubo iyaqhubeka - ukuhamba, ukulala, njll.
Ngaphezu kwalokho, i-insulin iyathunyelwa. Amazinga we-insulin: ubuningi, obuphakathi, obuphansi. Futhi esikhathini esithile, lapho i-insulin ikhuphuka, kuvela ukukhanya okubomvu - futhi wonke ama-acid wamahhala angena ngaphakathi kule seli, athengiswa esihlungwini futhi kunezikhathi ezi-2 zazo.
Isibonelo. Ama-apula noma ubhanana aqukethe ama-carbohydrate atholakala kuwo i-insulin. Yidla i-apula elilodwa kanye ne-insulin ekhishelwa kungakapheli amahora amathathu. Okusho ukuthi, ngemuva kwamahora ama-3 ungaqala ukuzivocavoca ejimini, yiya kuma-aerobics, gxuma ngentambo - kodwa ngaphandle kwama-carbohydrate, awuzukushisa igramu eyodwa yamafutha.
Ngakho-ke, inkomba ye-insulin ibaluleke kakhulu! Uhlala elingana nenkomba ye-glycemic.
Inkomba ye-Glycemic - isilinganiso sokugcwaliswa kwegazi noshukela.
Umkhiqizo ngamunye unama-indices we-glycemic amaningana. Futhi lezi zinkomba zincike ezintweni eziningi: ku ukuthi umkhiqizo walungiswa kanjani nokuthi yimuphi omunye umkhiqizo oxhumeka kuwo.
Iphutha elikhulu lapho usebenzisa i-cottage shizi
Isibonelo, ushizi wekotishi ungukudla okuthandwa kakhulu ngabantu abaningi kusihlwa. Ushizi wasekhishini uyathengwa ngoba une-calcium. Ikakhulu kulo mkhuba ushizi wekhishi eliphansi elinamafutha - futhi I-calcium ephuma ku-cottage shizi engenawo amanzi ayigwenywa, kepha ifakwa kuphela ushizi wekhishi langempela eliphakeme. Kodwa ngisho noshizi wekhishi onamafutha aphansi uphakamisa amazinga e-insulin ngaphezu kwesiqeshana sokhethi.
Ukukhula kwehomoni kumuntu omdala, unesibopho sokuqala ukushisa amafutha ebusuku. Futhi phakathi nobusuku ushisa amagremu ayi-150 we-adipose izicubu (imizuzu engama-50 kuphela). Uma i-insulin ikhishwa kusihlwa, khona-ke izovimba isenzo saleli hormone. Futhi ebusuku, amanoni avuthayo ngeke avele.
Awukwazi ukudla ushizi wekhishi ebusuku. I-insulin izokhishwa ku-cottage shizi kanye nokusabela kwe-inhibition kwe-hormone ebaluleke kakhulu yokukhula, okunomthelela ekushisweni kwamafutha ebusuku, kuzokwenzeka.
Futhi uma udla ucezu lwengulube, ngokwesibonelo, isinqumelo sobusuku. Lo mkhiqizo unenkomba ye-insulin ephansi. I-insulin cishe ayiveli futhi konke kuzohamba kahle - sizokwehla isisindo. Sincoma nemithetho: ongayidli ukuze wehlise isisindo.